Kursiga Cabdiraxmaan Saylici Noqonwaa Mid Xaqa Gadabuursi Ku Lumo Qalinkii Jamac Osman Geele Wadhaf Editor | Boorama Online Network
Connect on Facebook	Kursiga Cabdiraxmaan Saylici Noqonwaa Mid Xaqa Gadabuursi Ku Lumo Qalinkii Jamac Osman Geele Wadhaf Editor
January 4, 2013 | Filed under: WARARKA SOMALIYA & CAALAMKA | Posted by: BooramaOnline Waagii baryaaba waayahiisee, xurgufta aarinta Saylac waxay muujisay in dib u dhaca siyaasadeed ee Gadabuursi tirsanaayo inuu ka masuul ahaa laftiisu, waxaana u daliil ah qaabka madaxda sarsare ee Awdal/Salal/Gabiley ka soo jeedaa ay u maareeyeen “arrinta Saylac”.
Oday madasha fadhiyay siduu noo xaqiijiyay Salaadiinta Gadabuursi may warwareegin, waxayna ergada taabsiiyeen talada wayda ah ee beesha dhexe kula soo dhiiratay Gadabuursi . Hadalada Suldaan Dhawal ku dhirbaaxay ergada Siilaanyo ayaa noqotay waran samay adag oo Cabdi Waraabe galalooti u riday. “Boqol jir inuu magan ii yahay sheegtay, kuna baanay inuu sharciga jeexjeexo waa ii kow”, waa ereyada Cabdi Waraabe cumaamada ka tuuray, kana soo yeedhay Suldaan Dhawal oo sidii libaax dhaawacan u xumbaynaaya. Garnaqsi iyo wax sheega saddexda Suldaan Samatar, Wabar iyo Dhawal madasha ka bandhigeen waxay ahayd mucjiso dhagaha u toosisay niman waxkale u soo waysaystay. waxaa ku jirtay hadalo aan weligood Beesha dhexe laga hor odhan, waxaana ka mid ahayd ereyo toos u weerarray Wiilka Ina Biixi kana soo yeedhay Suldaan Dhawal oo kalmada mujaahid ee loogu yeedho Ina Biixi si gaara uga hadlay. “ Midna noqon maayo mid iskuulada lagu dhigto, midna noqon maayo kii dulmiga waday”, ayaa ka mid ahaa ereyada lagu toogtay Ina Biixi.
Waxaa inoo cadaatay in dhibaatooyika siyaasadeed ee ina soo gaadhay iyo sadbursiga beesha dhexe sababteeda ay lahaayeen siyaasiintii Gadabuursi ee safka hore ku jiray tan iyo intii Somaliland la aas-aasay. Waxaa inoo cadaatay in marka danta guud la weeraro inaan leenahay Salaadiin garaad iyo karti Ilaahay ku manaystay. Halka sartu ka qudhmaysay waxay ahayd dhinaca siyaasiintii hore oo awoodi waayay inay kaashadaan salaadiinta marka la soo qaado arrin khusaysa danta guud iyo aayaha. Cabdiraxmaan Saylici maanta ta ka suurtoowday waa tii horey uga suurtoobi wayday Rayaale oo jagada ugu saraysa dalka ka qabtay.
Hadduu Rayaale sida Sheekh Muse kula taliyay yeeli lahaa amba sida maanta Cabdiraxmaan Saylici yeelay ka suurtoobi lahayd, waxaa dhici lahayd in arrintu ku soo wereegi lahayd madaxdhaqameedka Gadabuursi oo siday maanta u hadleen iyo si ka daran u hadli lahaa, ileen waliba Sheekh Muusoo garta macalin ku ahaa ayaa noolaaye. Xasuusnaadana in dhibta Saylac gacanteena aan ku samaynay markuu Rayaale Salal gacanta u gashay reerka maanta cabanaaya. Tii Saylac dhamaatee, tii Gabiley ee Rayaale reer kaliya u salaxay iyaa xalkeedu weli hadhsan yahay iyo miinooyin tiro badan oo weli aasan.